MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 901
>Cartoon Saw Ngo - Power sharing
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၂၄၃) မင်းသုဝဏ်နှင့် ကလေးကဗျာများ မာမာအေး သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၀၈ ယခုတပတ်အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်မာမာအေးက စာရေးဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်နှင့် ကလေးကဗျာများအကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။ ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၆) အောင်ဝေး စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ဆရာဗန်းမော်တင်အောင် မကွယ်လွန်ခင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားတခွန်းရှိပါတယ်။ “လူတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့...
>Oratha – Let’s go, Brother
> သွားစို့ ငါ့ညီ သြရသ စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈ ဝီစီသံ တရွှီရွှီ ကားတဝီဝီ ခွေးတစီစီ။ သွားစို့ ငါ့ညီ ဝေးရာဆီ။ ။ No tags for this...
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိုးကုတ်ခရီးစဉ်တွင် တွေ့ရသော ကိုမင်းသူ၊ ဦးမိုးဟိန်း၊ ဒေါ်မေနှင်းကြည် (photo: Moemaka) မြန်မာပြည်မှာ အမှန်တရား လုပ်ရင် ဖမ်းသလား မိုးကုတ်က ရှမ်းတိုင်းရင်းသူ တဦး စက်တင်ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈...
>Thee Lay Thee Troupe in Japan for Nargis Fund Raising
> သီးလေးသီးနဲ့ ဆေးရောင်စုံ အငြိမ့်အဖွဲ့ ဂျပန်သို့ ရန်ပုံငွေပွဲ ကရန် ရောက်ရှိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဆေးရောင်စုံအငြိမ့် တဖွဲ့လုံး ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူ မင်္ဂလာဒိုးအဖွဲ့သားများက...
> မြန်မာ့ပညာရေးအစဉ်အလာရဲ့လမ်းဆုံး မောင်စွမ်းရည် စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ပညာရေးအကြောင်းကို ဘာကြောင့် ကျနော် တင်ပြရပါသလဲဆိုတာ သိရအောင် ကျနော်နဲ့ ပညာရေး ပတ်သက်ပုံကလေးကို အရင်တင်ပြခွင့်ပြုပါ။ ကျနော်က တသက်လုံးလုပ်လာတာက ကျောင်းဆရာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ...
> မမရှင် … သို့မာမာအေးစက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ‘မမရှင်’ ရေ …ဝေးတပြေကကံခေသူလေးညီမ ‘အေး’ မှာပြေးမလာနိုင်ကိုယ်ပိုင်ကုသိုလ်နှစ်လိုမျှဝေမေတ္တာစေလျက်မသေ မနာမအိုရာကြောင်းဘဝကောင်းတွင်ကျင်လည်ပါစေမြမျက်ရည်စင်ရှိုက်တငင်နှင့်နှုတ်တွင်သသမမသီချင်း ချိုညင်းညင်း။ ။ ၂ဝဝ၈ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်ည ၈း၃ဝ...
>Fears for health of Daw Suu
> ဒေါ်စု၏အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် အဖွဲ့ချုပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူမထံနေ့စဉ်ပေးပို့နေသော အစားအစာများကို လုံးဝလက်မခံတော့သည်မှာ ရက် ၂၀ ခန့်ရှိပြီဖြစ်သောကြောင့် စိုးရိမ်ရကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ယနေ့...
>Soe Myint Thane’s poem 1
> နာဂစ်အလွန်အိပ်မက် စိုးမြင့်သိန်း စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီမှာ … ဟေ့လူ ပင်လယ်ဓားပြ ပခုံးပေါ်မှာ ကြက်တူရွေး ရှိနေတာ … မျက်စိကို ကာထားတာ … သေဖို့...
>Cartoon Arkar – Sein Maung Shweee Baby Shweee
>Moe Cho Thin – It’s time to blossom
> စပယ်တွေ ပွင့်ပြီ မိုးချိုသင်း စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ကိုယ့်ကို မိန်းမ သိပ်မပီသဘူးလို့ တယောက်ယောက်က ပြောလာခဲ့ရင် လက်ခံရမှာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိန်းမရယ်လို့ ပျော့ပျော့ ပြောင်းပြောင်း၊ နူးနူးညံ့ညံ့ မနေတတ်။...
>May Shin, Burmese Classic Singer & Artist passed away
> ခေတ်ဟောင်း အဆိုတော်နှင့် ရုပ်ရှင် မင်းသမီးကြီး ဒေါ်မေရှင် (၁၉၁၇ – ၂ဝဝ၈) ကွယ်လွန်ပြီ မိုးမခ၊ မြန်မာအိုင်အက်စ်ပီ စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ယခင်က အနုပညာလောကတွင် ရှမ်ရှမ်းတောက် ကျော်ကြားခဲ့သူ...
>MoeMaKa Radio – 3rd Sept 2008
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ ၈ လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အထူးအစီအစဉ် (အရေးတော်ပုံ ခေါင်းဆောင်များနှင့် မဆလ၏ တန်ပြန်ချေမှုန်းမှုများ)...
>Win Pe – Cartoon – NEJ Sept 08
> Cartoon Win Pe – New Era Journal, September 2008 September 3rd, 2008 No tags for this post. Related...
>ORatha – Who assisinate Who ?
> နိုင်ငံတော် လုပ်ကြံမှု မြစ်ဖျားခံကြည့်ဖို့ သြရသ စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ မိုးမခ ၀ိုင်းတော်သားများ စာရေးလိုက်ပြန်ပြီ။ ဒေါ်စု ပါဖောမင့်လို့ ကျနော်က ရေးလိုက်တော့ စိတ်ဆိုးတဲ့လူက စိတ်ဆိုးတယ်။ ဒေါ်စုက ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာကို...
> မိုးကုန်ပိုင်း မုန်တိုင်းလန့်သူများ ဆောက်တည်ရာမဲ့မြင်ကွင်း ညွန့်ထွေး စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ ယခုနှစ် မိုးကုန်ခါနီးတွင် မုန်းတိုင်း နောက်ထပ်တလုံး လာနိုင်သေးသည်ဆိုသော သတင်းများကြောင့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားခဲ့ကြရသည့်ပြည်သူများမှာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုများ ခံစားနေကြရသည်ဟု လေဘေးသင့်ဒေသခံများက...
> မခူးဖြစ်သေးတဲ့ စပျစ်သီးများ ကိုငြိမ်း(မန္တလေး) စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ ကျွန်ုပ် နောက်ဆုတ်လိုက်သောအခါ ရှေ့ကို ရောက်ရောက်သွားတော့၏။ လူအဖွဲ့အစည်းကြီးထဲမှာ … ‘ကုန်တင်ရထားကြီး…’ တွေနဲ့ ‘ရေနံတင်သင်္ဘောကြီး’တွေ ဖြတ်သန်း ခုတ်မောင်းနေကြပါတယ်။ ကျနော်ဟာ...
> ဆရာတော် ဦးဓမ္မပီယ နှင့် ဒကာ၊ ဒကာမများက နာဂစ်သင့် ခိုကိုးရာမဲ့ကလေးများအတွက် လှူ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ သြဂုတ်လ ၂၆ နေ့က သင်္ကန်းကုန်းဒေသ၊...
> ကြာနေပြီ နာရီတွေလည်း ကြည့်ဦး ခရမ်းပြာထက်လူ စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ ငါရောက်နေတာကြာပြီ ကြာသလောက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောက ပယောဂနဲ့ ပရောပရီ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်က ငါလွင့်စင် တကိုယ်ရေ တကာယ လင့်စင်ထိုးပြီးလည်း...
>Saturinga Bala – No More Pride to beaBurmese
> ၀ံသာ မနုနိုင်ကြတော့သည့် အကြောင်း မေတ္တာစာ စတုရင်္ဂဗလ စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ မကြာခင်က မျက်စိကြီး နားကြီး မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးတဦးနှင့် စကားစပ်မိရာမှ စင်္ကာပူက ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မောင်ကြည်က ၂၁ ရာစုအတွင်း...
> ဆန္ဒပြသူများရောက်ရှိနေသည့် ထိုင်းအစိုးရရုံး (Government house) (Photos: AP & Reuters) ထိုင်းအစိုးရ ဆန့်ကျင်မှုများ ဌာနအသီးသီးသို့ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့ AFP သတင်းဌာန စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်...
>Lawyer meets Daw Suu, says she’s thin but well
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်း (photo: Moemaka) ဒေါ်စုနှင့် ရှေ့နေ ထပ်မံတွေ့ခွင့်ရ ဒေါ်စု၏ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိ ရိုက်တာ သတင်းဌာန စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်...
>Mar Mar Aye 242
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (အမှတ် ၂၄၂) မင်းသုဝဏ်၏တေးကဗျာများ မာမာအေး သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၀၈ ယခုတပတ်ရေဒီယိုဆောင်းပါးတွင် ဒေါ်မာမာအေး ရွတ်ဆိုထားသည့် ဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်၏ ‘ပျဉ်းမငုတ်တို’ ကဗျာကို နားဆင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆရာကြီး၏...
>While NLD against the Junta’s political argenda, ex-party writer says "yes"
> ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အင်န်အယ်ဒီက စစ်အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ကြေညာချိန်တွင် ပါတီဗဟိုအမှုဆောင်ဟောင်း သက်ကြီး စာရေးဆရာကြီး မောင်စူးစမ်းက စစ်အစိုးရလမ်းကြောင်းကို လက်ခံကြောင်း စာရေး မိုးမခ...
> ထူးထူးခြားခြား ကမ္ဘာတလွှား၊ နိုင်ငံတကာသတင်း တိုထွာ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၈ သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၈ စပိန်နိုင်ငံမှ ခရမ်းချဉ်သီး ပစ်ပေါက်ပွဲ (သြဂုတ် ၂၈၊ အေအက်ဖ်ပီသတင်း) သြဂုတ်လ ၂ရ...
>McCain’s pick: Sarah Palin
> စင်တော်က ကောက်တော့လည်း ဉာဏ်ဦးမောင် သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၈ မနေ့ကပဲ ဒကာနှစ်ယောက် ရောက်လာလို့ နောက်နောက်ပြောင်ပြောင် ပြောလိုက်သေးတယ်။ အယ်လင်နာ ရုစဗဲ့ စကားကို ကိုးကားပြီးတော့ပါ။ အယ်လင်နာ ရုစဗဲ့ကပြောတယ်၊ “ကြီးကျယ်ခမ်းနားသူတွေက...
>Stories of 8888, 20 years ago by newspaper clips of that time – 3
> ၈၈ အနှစ် ၂၀ – အခန်းဆက်များ သတင်းစာများက ပြောတဲ့ ၈၈ အရေးတော်ပုံမြင်ကွင်း – ၃ မိုးမခ သြဂုတ် ၃၀ ၂၀၀၈ ၈၈ အရေးတော်ပုံကာလမှာ ကြေးမုံ၊...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၅)အောင်ဝေးသြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဆရာမောင်သာရရဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို ကျနော်အမှတ်ရတယ်။ “ချုပ်နေ့ကျူးက၊ ရူးမူးတုန်လဲ့၊ ကိုးရာမဲ့ဟု၊ ကျီးကဲ့သို့လျှင် မတွေးချင်။ ခင်ပုပ်လည်းငှက်၊ ညဉ့်လည်းနက်၊ ထွက်၍တိုက်ခိုက်သည်တကား” တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀တွေထဲမှာ ယုံကြည်ချက်ကို...
> သြဂုတ်လ စာကိုး စကားကိုး သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၈ “အနှစ်(၂ဝ) ကြာမှ ဦးနု အဲသည်တုံးက လုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက်ဟာ လုပ်သင့်တဲ့ ကစားကွက်လို့ ၁၉၈၈ ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေနဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း အတော်များများက...
> ရန်ကုန်က သရုပ်ဖော်အနုပညာ (ပါဖောမင့်ပွဲ) “အဖွင့်နဲ့ အပိတ်” ကျင်းပမည် မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) သြဂုတ် ၂၉၊ ၂၀၀၈ မြန်မာ အနုပညာရှင် ၆ ဦးက ၃၀ သြဂုတ်၊...
Page 901 of 944«1...899900901902903...944»